WINE 5.8 ikozvino yavapo, ine zviziviso zvePlag & Play zvishandiso | Linux Vakapindwa muropa
WINE 5.8 ikozvino yave kuwanikwa, ine notices dzePlag & Play zvishandiso uye nyowani GIF encoder
Senge mazuva gumi nemashanu kubva pavakachinja modhiyo yekuvandudza uye mushure meiyo software v5.7, yave kuwanikwa kurodha pasi uye kumisikidza WAINI 5.8. Semazuva ese, timu yekusimudzira yakangoburitsa mashoma mashoma seakakosha maficha, pakati payo nguva ino yatinayo kuti vaunza rutsigiro rwePlag & Play ziviso, rutsigiro rwakagadziridzwa rweClang muMSVC modhi kana yekutanga kuitiswa kwekodhi neGIFS .
Kune rimwe divi uye semune imwe nhaurwa nyowani, vatora mukana wekugadzirisa zvikanganiso, makumi mana nesere, pamwe nekumwe kugadzirisa kwakaguma 322 kuchinja, mazhinji acho (85) akaunzwa nemusunguri Zebediah Mufananidzo. Rondedzero izere yezvitsva, kusanganisira kugadzirisa uye shanduko, inowanikwa ku Iyi link uye pazasi iwe une runyorwa rweshanduko dzavakaona dzakakosha zvakakwana kuratidza pakutanga kwetsamba yavo yekupfupikisa.
WINE 5.8 inosimbisa
Kutsigira kwePulagi & Ridza zviyeuchidzo zvemuchina.
Rumwe rutsigiro rwekugadzira naClang muMSVC modhi.
Kunyanya kufambira mberi paWineD3D Vulkan backend.
Kutanga kuitiswa kweGIF encoder.
Vulkan tsananguro yekuvandudza.
Vashandisi vanofarira izvozvi vanogona kuisa WINE 5.8 kubva kune yayo kodhi kodhi, inowanikwa mukati izvi y iyi imwe link, kana kubva pamabhinari anogona kutorwa pasi kubva ku pano. Mune yekupedzisira link pane zvakare ruzivo rwekuwedzera iro repamutemo reprojekti kuti ugamuchire izvi uye nezvimwe zvichavandudzwa munguva yemberi nekukurumidza pavanenge vagadzirira masystem senge Ubuntu / Debian kana Fedora, asi zvakare Android uye macOS.
Iyo inotevera vhezheni ichave yatove WINE 5.9 iyo inofanirwa kusvika rinouya Chishanu 22 yaMaychero bedzi pasina zvinoshamisira. Zvinotarisirwa kuti zveiyi vhezheni vacharamba vachienderera mberi muzvikamu zvakaita sekumisikidza kweGIF encoder uye nekuvandudza kuvimbika, kugadzikana uye kuenderana neWindows zvinoshandiswa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 5.8 ikozvino yave kuwanikwa, ine notices dzePlag & Play zvishandiso uye nyowani GIF encoder
Mangohud: NVIDIA GPU uye OpenGL inotsigira kugadzirisa